निर्णय Archives - Lokpati.com
Tag - निर्णय
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका २६ निर्णय
काठमाडौं, २ असाेज। सरकारले गत भदौ २६ र ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । बिहीवार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषदका...
नेकपा सचिवालय बैठक : के-के भयो निर्णय ?
काठमाडौं, ९ भदौ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकले पार्टी भित्रका नेता कार्यकर्ताका बारेमा सार्वजनिक टिका टिप्पणी नगर्न कडा निर्देशन दिएको छ।
नेता कार्यकर्ताका बारेमा केही भन्नुपरेमा तथ्यसंगत ढंगले पार्टीको...
प्रदेश सरकारको निर्णय : पर्यटनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत
पोखरा, ६ भदौ । गण्डकी प्रदेश सरकारको बुधबार बसेको बैठकका निर्णय आज शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले बिदा पर्यटनसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ स्वीकृति गरेको जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद बैठकका ३५ निर्णय
काठमाडौं, ५ भदौ। मन्त्रिपरिषद् बैठककले बिहीबार ३५ निर्णय सावैजनिक गरेको छ। सरकारले ग्वान्जाओको महावाणिज्यदूतमा सहसचिव हरिशंकर पुडासैनीलाई नियुक्त गरेको छ।
भदौ १, २ र ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक...
काठमाडौं, ९ साउन। सरकारले गत साउन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेका निर्णय सार्जनिक गरेको छ। बिहीवार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू...
विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक सकियाे, के भयाे निर्णय ?
काठमाडाैं, २८ असार ।केही दिन देखिकाे अविरल वर्षापछि देशका विभिन्न भूभागमा बाढी पहिरो र डुबानका कारण भएको क्षति र पीडितको उद्धार तथा पुनस्र्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठक बसेको छ।
मन्त्रिपरिषदकाे निर्णय सार्वजनिक : यस्ता छन् १४ निर्णय
काठमाडौं, ३० जेठ । सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषदको जेठ २३ गते बसेको बैठकमा भएका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका छन् । सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले आज...
चौकी आक्रमण प्रयास : यस्ता छन् सुरक्षा समितिका निर्णय
काठमाडौं, २० जेठ। विप्लव समूहले चौकी आक्रमणको प्रयास गरेपछि सोमबार जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेको छ ।
सोलुखुम्बुका प्रमूख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र राना मगरले जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले विप्लव समूहको गतिविधिमाथि...
यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का १६ निर्णय (पूर्णपाठ)
काठमाडौं, ९ जेठ। गत जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १६ निर्णय गरेको छ। बैठकको निर्णय सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरि सार्वजनिक गरे।
बैठकले सरकारी जग्गा...
नेपाल र भियतनामबीच सिधा हवाई सेवा : कस्तो हुँदैछ सम्झौता ?
काठमाडौं, २७ वैशाख। मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल र भियतनाम सरकारबीच हुने हवाइ सेवा सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
पछिल्लो मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार तथा सूचना...